DEG-DEG: Golaha Guurtida Somaliland oo waqtiga u kordhiyey xukuumadda & Wakiillada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
DEG-DEG: Golaha Guurtida Somaliland oo waqtiga u kordhiyey xukuumadda & Wakiillada
11th May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Golaha Guurtida Somaliland ayaa go’aan ay soo saareen ku sheegay in waqtiga loo kordhinayo xukuumadda Axmed Maxamuud Siilaanyo, iyagoo taladaas ay horay usoo jeediyeen Guddiga doorashooyinka maamulkaas.
Fadhi Goluhu Guurtidu uu maanta oo isniin ah yeeshay ayaa lagu go’aamiyay in Xukumadda iyo Wakiilada loo kordhiyo muddo dhan 1 sanno iyo 10 bilood. Muddada Madaxweynaha iyo wakiilada ayaa ku eekaan doonta 27-ka April 2017.
Go’aankaas waxaa kasoo horjeeda Gudoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland, C/raxmaan Cirro, kaasoo ah gudoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani.
Taageerayaashiisa ayuu ugu baaqay iney debadbaxyo looga soo horjeedo muddo u kordhinta xukuumadda ku qabtaan dhamaan deegaanada Somaaliland, waxaana xukuumaddi ciidamo amaan geysay magaalooyinka waaweyn.
Guddida doorashooyinka Somaliland, ayaa 21-04-2015 shaaciyay in wakhtiga ay ku qaban karaan doorashada Madaxtooyada iyo Wakiilada ay 1-da bisha June 2016. Laakin go’aankaas waxaa badelay Golaha Guurtida oo sheegay in Guddiga doorashadu uusan caymi karin waqtiga doorashada.
Halkan ka akhri go’aanka Guurtida ee ku aadan muddo kordhinta iyo sababaha loo cuskaday
Golaha Guurtidda JSL, ayaa isagoo tixraacayay warqada Madaxwaynaha JSL ee LrJSL/M/GG/81/2-3218/04/2015 ee25/04/2015, kuna saabsanayd nuxur ahaan ka waajibaad qaadashada dibu- dhaca ku yimid doorashadii Madaxtooyada iyo Golaha Wakiiladda, kuna lifaaqnayd warqaddii koomishanka doorashooyinka qaranka, ayaa gudo galay muddo korodhsiimada.
Si Goluhu uga guto xilka kaga aadan, ayuu shir- Gudoonka Golaha Guurtidu u magacaabay guddi ka koobnayd 30 xubnood, oo kala ahaa 28 mudane, Xoghayaha Guud ee Golaha iyo lataliyaha sharciga 30/04/2015, Goluhuna ansixiyay kuna ansixiyay cod loo dhana(Unanimous ) .
Kullankii ugu horeeyay wuxuu Guddigu ka dhagaystay si kala gaar-gaar ah labadda Xisbi ee kala ahUCID iyo WADDANI 05/05/2015.
Ugu dambayntii Guddigguwaxay tallo soo- jeedin dambe ka dhagaysteen Xisbiyada Qaranka 09/05/2015, taasi oo ay ku kordhinayeen tallo soo-jeedimahoogii hore .
Dhinaca kale waxay Guddiggudiirada ku saareen , lagama maarmaana u arkeen in Diwaan-galinta muwaadinka , codbixiyayaasha iyo doorashooyinkuba si xor ah , xalaal ah oo nabadgalyo ku dheehantahay uga wada qabsoomaan dhammaanba dalka , gaar ahaana Gobollada iyo Degmooyinka Bariga ,iyado la ilaalinayo midnimadda iyo isu-dhamaashaha dhul ahaaneed ee JSL .
Guddiggu waxay yaqiinsadeen inay jiraan fara-galino dibadeed oo lagu kala qaybinayo, dad ahaan iyo dhul ahaanbaJSL, taasina ay ka soo horjeedo jiritaanka iyo midnimadda ummadda Somaliland , sida ku cad Qoddobka 38aad, farqadiisa 4aad, xarafkiisa (b) ee Dastuurka JSL .
Guddiggu waxay is-tuseen baahida loo qabo xoojinta amniga Gobolladda iyo Degmooyinka Bariga , iyo isla-marahaantana xal u helidda wixi tabashooyin iyo khilaafaad jira, taasi oo ubaahan wakhti lagaga bogan karo suullinta arrimahaasi , iyadoo la –isla kaashanayo Dawlad iyo shacbiba .
Markii uu dhagaystay warbixintii Guddigga oo ay ku ladhnaayeen fikradihii,aaraadii , iyo tallooyinkii
Markii uu qiimeeyey xaaladka , iyo duruufaha ka jira Gobolladda iyo Degmooyinka Bariga iyo guud ahaan ba dalka JSL ;
Markii uu lagama-maarmaan u arkay in ay ka suurto –galaan Diwaan- gelinta muwaadinka iyo cod-bixiyeyaashu dhammaanba dalka JSL , si ay u suganto is- raacsananta dhul ahaaneed iyo dad ahaaneedba ee Dastuurku waajibiyay ;
Markii uu yaqiinsaday in go’aankii ay ku cayimeen Koomishanku wakhtiga doorashadu u ahaa mid baalmarsan, waa faqsanayna Dastuurka iyo shuruucda dalka, iyago sammeeyay muddo korodhsiimo anay awood sharciyeed u lahayn ;
Markii ay arkeen in xeerkii hore ee doorashada ee Golaha wakiiladu u ku dhaqankiisu ku ekaa doorashaddii hore oo kaliya , illaa haddana anu jirin xeer u diyar ah doorashada Golaha Wakiiladda, kaasi oo u baahan wakhti, wada-hadal, is-qancin, iyo isu-tanaasul dhinaca saami-qaybsiga oo hore moran uga taagnaa, illaa haddana u ka taagan yahay;
Markii uu qiimeeyay xaaladka cimmilladda ee degmooyinka Xeebaha dalka JSL iyo wakhtiga ku haboon inay doorashadu ka qabsoonto ;
Markii uu si mugleh u qiimeeyay xaalaadka dhaqan/dhaqaale bulsho, iyo nabadgalyaba, guud ahaanba, gaar ahaana saamaynta dhaqaale ee colaadda ka oogan gacanka cadmeed ay ku yeellatay ganacsigii Somaliland;
Iyado laga taxadirayo , dib- u dhac dambe oo ku yimaada Doorashooyinkan iyo mudo kordhin soo noq-noqota Iyo dhammaystir la’aan qabyooyinka taagan ;
Marku arkay Qoddobka 42aad faqradiisa seddexaad ee Dastuurka Jamhuuriyada somaliland ;
Marku arkay Qodobka 83aad faqradiisa 3aad iyo 5aad ee Dastuurka dalka Jamhuuriyadda Somaliland;
Isago ka duullaya , tix galiyeyna , kuna go’aan qaatay dhammaanba asbaabaha kor ku sheegan, kuna cad;
warqadda lambarKDQ/XK/406/2015 ee 20/04/2015, kana soo baxday xafiiska koomishanka Doorashooyinka Qaranka , madama anay waafaqsanayn xeerka doorashada lambar 20/2001,qoddobkiisa 8aad oo u dhigan nuxur ahaan “in anay koomishanku cayimi Karin muddo/maalin doorasho oo ka baxsan dhammaadka muddo xileedka Madaxwaynaha, ku xigeenkaiyo Golaha wakiiladdaba, ‘’sido kalana anay waafaqsanayn qoddobada 42aad iyo 83aad ee DastuurkaJSL .
2- Waxa muddo xileedkii Madaxwaynaha iyo ku xigeenka Madaxwaynaha oo ku eg 27/7/2015, lagu sammeeyay korodhsiimo ka bilaabmaysa 28/7/2015 illa 27/4/2017.
4– Muddo xileedka Golaha Guurtiddu wuxu noqonayaa hal sano ka dib (one year after) dhammaadka muddo xileedka Golaha wakiiladda oo noqonaya27/4/2017, sida waafaqsan ama ku cadba go’aanka lambar GW/KF-19/245/2003 ee 29/03/2003, una dhigan “in muddada xilka Golaha Guurtiddu markastaba hal sano ka dambayso taariikhda dhammaadka muddada xilka Golaha wakiiladda ” .
5- Doorashada Maddaxtooyada iyo Golaha Wakiiladduwaxay qabsoomayaan isla hal wakhti, ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyay , oo waafaqsan qoddobadda 42aad iyo 83aad ee Dastuurka Dalka Jamhuuriyada Somaliland .
B- Wajibadka la kala qabanayo, la wada qabanayo iyo hawlaha la dhammaystirayo
Sidoo kalena loo sammeeyaa Barnaamij hawleed u gaar ah , oo laga wada qayb –galayo Goleyaal ahaan, Xisbiyo Qaran, koomishan doorasho, waxgaradka bulshada qaybahooga kala duwan iyo shacbiba.
Golaha wakiiladda waxa ku waajib ah in uu meel-mariyo qaybna ka qaato hindise sharciyeedyada qaranku u bahan yahay si fir-fircoon oo xilkasnimo ku jirtana u gutaan waajibaadkooda Dastuuriga ah .
NB waxaa ku lifaaqan halkani liistadii Guddigga ,xubnihii madasha fadhiga ka qayb-galay.
4- C/laahi Ibraahim Habane Xoghayha Guud ee G/Guurtidda JSL
Wasiir Diini: Dib-u-dhiska Ciidamada Xoogga Dalka ayaan Imaaraadka Carabta kala hadlay
Sawirro: Daawo Kismaayo oo soo kabaneysa